Neken’ny HCCny lalàn’ny fifandraisana… (NewsMada) | AEMW
Neken’ny HCCny lalàn’ny fifandraisana… (NewsMada)
Efa nampoizina… Hiroso any amin’ny jadona sy ny fanampenam-bava isika, manomboka izao taorian’ny naneken’ny HCC etsy Ambohidahy, araka ny fanapahana noraisin’izy ireo, omaly fa mifanaraka amin’ny lalàmpanorenana ilay lalàna mifehy ny fifandraisana sy ny serasera. Mifanaraka amin’ny lalàna avokoa ary azon’ny filoham-pirenena hampiharina avy hatrany, ankoatra ny andininy sasany ilana fandikana manokana ny fomba famakiana azy.
Eo koa ny nilazan’ny etsy Ambohidahy fa mifanaraka amin’ny lalàmpanorenana ny heloka momba ny tranonkalam-pifandraisana « cybercriminalité » taorian’ny nanovana sy nanampiana ny votoatin’izany lalàna izany.
Tsy nisy nihaino ny kiakiaka sy antson’ny mpanao gazety, ny sehatra iraisam-pirenena, ny fiarahamonim-pirenena ny amin’ny tokony hifampidinihana aloha. Efa nolanian’ireo depiote 18 amin’ireo 151 io lalàna io rehefa avy nandalo teny amin’ny Antenimierandoholona. Mba nantenaina ny etsy Ambohidahy fa hilaza izany ho tsy mifanaraka amin’ny lalàmpanorenana.
Hifampiandry kendry tohina sy hifanao valifaty…
Tsy izany anefa ny nitranga fa izao miroso any amin’ny famerana ny fahalalahana sy ny fahafahana miteny ary maneho hevitra izao ny firenena. Tsy ho afa-bela ny mpanao gazety na koa ny olon-tsotra ary ho tandindomin-doza isaky ny vaovao havoaka na ny hevitra aposaka… Ho feon-dakolosy tokana sisa ho heno sy ho hita amin’ny alalan’ny vaovaom-panjakana amin’ny ankapobeny.
Tsy hifankahitana intsony eto izany, manomboka izao, satria hifampiandry kendry tohina sy hifanao valifaty isika. Tompon’andraikitra tanteraka eo anoloan’ny tantaran’ny fahalalahana sy ny fahafahana ireo tompon-kevitra amin’izao firosoana any amin’ny jadona sy fanampenam-bava izao.
← Filoha Rajaonarimampianina : tsy nisy nahavita ny vitan’ny fitondrana, hono, hatramin’izay (NewsMada)
Fantina sy fintina (NewsMada) →